“Waa geesi sida libaaxa,” Sir Alex Ferguson oo sharaxaad ka bixiyey sababta u Ronaldo uga fiican yahay Messi – Gool FM
“Waa geesi sida libaaxa,” Sir Alex Ferguson oo sharaxaad ka bixiyey sababta u Ronaldo uga fiican yahay Messi
Kaafi May 18, 2016
(Manchester) 18 Maajo 2016. Cristiano Ronaldo ayaa wax yar ka wanaagsan Lionel Messi maxaa yeelay waxa uu u dheeli karaa Stockport County halka uu dhalin karo saddexley, sidaas waxa uu yiri tababarehiisii hore Sir Alex Ferguson.
Dooda ah yaa wanaagsan xiddiga Real Madrid iyo laacibka Barcelona sanado badan ayey soo socotay waxa ayna xoog ku wada haysteen abaal marinta Ballon d’Or tan iyo 2008.
Iyada oo uu Messi shan jeer ku guuleystay Ballon d’Or halka dhigiisa uu hantay saddex, hadana tiro badan oo ka mida taageereyaasha xiddiga Portugal waxa ay aaminsan yihiin in uu isaga ciyaaryahan ahaan ka dhameystiran yahay Argentine-ka.
Hada waxa ay u muutqaa in halyeygii hore ee Manchester United Sir Alex Ferguson uu isna aragtidaas qabo, Alex waxa uu Ronaldo ku soo maamulay Old Trafford sanadihii u dhexeeyey 2003 ilaa iyo 2009.
“Isaga oo ka hadlaya dhacdo Dublin loogu qabtay Rory McIlroy waxa uu yiri: “Wey I xiiso galineysaa in aan maqlo waliba wax badan wax ku saabsan laba ciyaaryahan maal mahan: Ronaldo iyo Messi.
“Hada qalad ha ii fahmina, Messi waa ciyaaryahan cajiib ah, marka uu kubadda xakameenayo waa sida in uu dacas xiran yahay oo kale. Laakiin halkan, aniga, farqiga waxa weeyey: Messi waa ciyaaryahan Barcelona ah laakiin Ronaldo waxa uu u dheeli karaaa StockPort County isaga oo dhalin kara saddexley.
“Wax walba wuu leeyahay. Labada lugoodba wuu ku laadi karaa, wuu madaxeyn karaa kubadda, waa geesi sida libaaxa, waxaana jira wax yaabo kale oo aysan dadka eegin.
“Waqtigeygii Manchester United waxaan nasiib u lahaa in aan helo dad badan oo saacado dheeri ah ku bixiya si ay u fiicnaadaan. Gary Neville waxa uu iska soo qaaday heer ciyaaryahan dhex dhexaad ah ilaa uu ka noqday mid cajiib ah sababo la xiriira shaqadiisa adag, sida David Beckham.
“Laakiin Ronaldo waxa uu sameyn jiray is daalin, walina wuu sameeyaa. Waxa uu rabay oo qura noqoshada kan ugu wanaagsan dundida.”
RASMI: Kabtan John Terry oo sanad kale la siii joogi doona Chelsea
"Wixii hadal ah waxaan u daynay Madrid, koobabna Barcelona" - Gerard Pique oo u jawaabay saxaafada Madrid!